All Money on Earth – FX-taliyahaada
Sida loo ganacsiga Suuqyada Financial
Su'aalo iyo Jawaabo – Trading
Ganacsiga ee Suuqyada Financial
All Money iyo Hantida ee Adduunka ku cad Physical $100 biilasha – Infographic
Mid ka mid ah Boqol Dollar
$100 – Inta badan faalsada heshaan lacag dunida. The kaydinta badan loo isticmaalo ee qiimaha adduunka ee ka ganacsada daroogada. Ilaaliyaa dunida dhaqaaqin.
Toban Kun oo Doollar
$10,000 – Ku filan fasax weyn ama si ay u iibsadaan baabuur loo isticmaalay. Ku dhowaad hal sano oo shaqo, waayo aadanaha celcelis ahaan dhulka.
Mid ka mid ah Million Dollar
$1,000,000 – waa square lacag caddaan ah dabaqa ah.
Boqol Milyan oo Doolar
$100,000,000 – Badan in ay raacaan, waayo, qof walba. Haboon xunna on ISO ah / sariirtaada xajmi caadiga ah Military.
Mid ka mid ah Billion Doolar
$1,000,000,000 – Tani waa sida a billion dollars eg. 10 ugalay ah $100 biilasha.
Mid ka mid ah tiriliyan oo Doolar
$1,000,000,000,000 – Markii ay ku tuuraan agagaarka erayga “trillion” sida, waxba ma aha, tani waa realit ee $1 trillion dollars. square ee ugalay in ay xaq u yahay $10 billion dollars. 100x iyo aad leedahay munaaraddii $1 trillion in uu yahay 465 cagaha dhaadheer (142 mitir).
Gold iyo Silver jira oo dhan maalgelinta ee adduunka
Demonocacy.info ayaa ka go'an articles for Gold oo dhan iyo Silver oo dhan ee aduunka. Tani waa soo koobitaanka kooban ee lacagta yar ah dahab iyo lacag la heli karo in dunida ujeedooyin maalgashi. Qiimaha saxda ah ee dhammaan Gold maalgashiga World yahay $2.5 Trillion USD ee $ 40 / garaam ama $ 1250 / ounce.
si weyn u jira waa lacag dheeraad ah oo dunida oo dhan ka qaalisan dahabka, laakiin sababta oo ah lacag loo dhufsanayaasha ka jaban tahay dahabka (wax ka yar $ 20 / oz in 2017), wax badan oo lacag ah helay lumay wakhti dhan. Silver sidoo kale loo isticmaalaa in wax soo saarka warshadaha. Inta ay maalgashi lacag la heli karo si ay dadweynaha waa qadar yar la yaab leh. dawladaha adduunka uma hanato kasta oo kaydka oo lacag ah oo muhiim ah, ka duwan dahab.
Labaatan iyo sideed – $28 Trillion in Base Money
konton – $50 Trillion in Bank Money
Tani waa inta lacag ee waa adduunka. Ma aha oo dhan lacag caddaan ah jirka inkastoo (sida kor ku qoran), ugu waa ka digital:
Money Base ka kooban yahay lacag lagu qabtay by bangiyada (ka Central Banks helay markii Banks iibin Dowladda iyo dhaaraheedii Corporate in Banks ay Dhexe, lacagta loo heli karaa daynta in ganacsiga gaarka loo leeyahay), lacagta ku kaydsan booska bangiga ee (lacagta caddaanka ah jirka) iyo lacag caddaan ah in gacmaha dadka. Lacagtan aan la heli karin ee ATM ah.
Bank Money ka kooban tahay lacagta lagu kaydiyaa bangiyada by shirkadaha iyo dadka, diyaar u baxaan waqti kasta. Bank Money waxaa sidoo kale oo korsaar laysku soo baxay by Banks dadka iyo ganacsiga '. Shuruudaha bankiyadu ku ah reserve ugu yaraan (sida caadiga ah 10%) ay tahay in ay sii on gacanta. Haddii qof kasta oo ay go'aansadeen in ay tagaan si ay ATM iyo jiid walba, waxaa jiri lahaa baxsad ah oo ku saabsan bangiga.
konton iyo siddeed $58 trillion – Qiimaha All Bonds Dowladda ee aduunka
muwaadiniinta adduunka ayaa lacag dulsaar ah lacagtan badan sababta oo ah deymaha abuuray by dawladaha dalka.
Bonds Dowladda (deynta) waxaa loo arkaa ah “class hantida” maxaa yeelay, Bonds (bixiyayaal canshuurta) bixisid dulsaar lacagta amaahatay. amaahiya helo shahaado (Bond The- yaboohay yabooh run ah in ay bixiyaan $$$ back + xiisaha) ee soo laabto.
Sida caadiga ah Bonds Dowladda waxaa loo tixgeliyaa maal amaan ah oo halis yar oo aan la bixin, sababtoo ah Dowladaha qori kartaa sharciyada cusub (kordhiyo & abuuro Cashuuraha Involuntary) in la qaato lacagta dadka xoog (marka la eego culus: dhac sharciyeysan). Ikhtiyaar kale ee dib-u-bixinta in MA waa sidaas oo wanaagsan si ay u maal-/ deyn waa in ay leeyihiin Reserve Federaalka “print” lacagta cusub, this addimaye awoodda wax iibsiga ee lacagta iyada oo sicir-bararka iyo maal helo dib wax ka yar ay ku riday. Tani inta badan waa habka doorashada dawladaha.
Waa maxay sababta aad u badan oo dowladda Deynta? Sababtoo ah siyaasiyiinta ka badan-yabooha muwaadiniinta waxa ay awoodaan (MA) samatabbixin, oo sidaasaynu yeelaynaa inuu ku guuleysto doorashada. Marka Politicans ku guuleysto ay soo amaahato lacag si loogu bixiyo ballamihii ay si si ay u sii ballamada. Inta badan waxay amaahan in ay naftooda iyo la-hawlgalayaasheeda crony ay dambi ka Hodmin.
Mid ka mid ah boqol iyo toban $116 trillion – Oo dhan Kaydka iyo Bonds Corporate ee aduunka
Bonds Corporate la mid ah Dowladda Bonds yihiin, laakiin khatar badan. shirkado badan oo waa weyn qaadaan halis fog ka yar lacagta amaahda shakhsiyaadka– xaqiiqda u dhigtaa khatarta iyo hoos u kaxeeya dulsaarka amaahda. shirkadaha Big amaahan kartaa lacag si caddaalad ah oo raqiis ah marka la barbar dhigo shaqsiyaadka gaarka ah. Mararka qaarkood shirkadaha amaahato lacag si aad dib ugu soo iibsan ay stock iyo riixdo qiimaha stock kor, by si kobciya maal, halka dhaqaale gutting shirkadda.
Kaydka aad bay u bedela karaa qiimaha, maxaa yeelay, qiimaha waa ka badan aan la taaban karin- qiimaha waxaa lagu go'aamiyaa P / E (Price in Lacagta) ratio iyo bixinta saamiga stock filayo.
Laba boqol iyo sagaashan $290 trillion – Qiimaha oo dhan Business Private iyo Estate Real ee aduunka
Haddii aad rabto in aad lahayd si ay u iibsadaan dunida oo dhan, tani waa inta lacag ee aad u baahan tahay.
$180 Trillion waxaa loogu talagalay Estate Real
$100 Trillion waa for Business Private Registered
$10 Trillion waa hay'adaha ka baxsan sharciga.
Tani raso gaarka ah ee lacagta waxaa suurtageliyay lahaanshaha gaar ahaaneed iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay iyada oo shuuciyad.
Shuuciyad Democratic waxaa loo arkaa inay nidaamka ugu xumaa dhaqaale ka hor inta aysan eegno kale ee. Shuuciyad Democratic dallacsiiyey by Aabayaashii aas of USA. Qaar ka mid ah wac Heroes Aasaasayaasha, Dhanka kale qaar ka mid ah iyaga ugu yeedho “Milkiilayaasha addoon oo aan doonayaa in aan cashuur UK”. Xulashada adigaa.
Shuuciyad Corporate waxaa loo arkaa inay nidaamka xukuma ee United States hadda.
Dowladda shuuciga qabasho lahaa gacanta lacag dhan this (Ganacsiga iyo Estate Real) ku saleysan in ay dawladdu ogtahay kuwa idinka khayr roon meesha inay maalgashi kaydka, iyo dawladda ordi lahaa ganacsi oo dhan iyo leedahay oo dhan hantida maguurtada.
wadada cadaabta had iyo jeer waa laami la niyad wanaagsan. Nacasku u malaynaayo inuu ogyahay wax badan ka khatar badan tahay nacas in ogyahay waxba ma uu og yahay waa.
Mid ka mid ah $1 Quadrillion – Qiimaha oo dhan taagayo ee aduunka
Tani waxay muujinaysaa qiimaha wadarta guud ee taagayo oo dhan ee aduunka (khamaar style Casino qaab heshiis, sameeyey by bangiyada). Taagayo waa weynayd khatar ah. Waxay khayaali ah, laakiin weli aad u dhabta ah waa. Taagayo waa khamaar style casino on qiimaha wax kasta oo ay doortaan in ay sharad ku saabsan, qaab heshiis, sameeyey by bangiyada, dusha kala mid ma (waayo, ninna si cad u fahamsan yahay web ay isku maran & daadsanaanta of taagayo).
Soo qaado “wax” ee qiimaha, dhigi khamaar ah qiimaha mustaqbalka ee “wax”, ku dar heshiiska & aad leedahay derivative a. Banks dhigi faa'iidada weyn ee taagayo, iyo marka fursadaha Cadha xumbo waa cashuur kor ku dhamaan doonaa biilka. Tani visualizes caymiska guud ee taagayo (guud). Similar in caymiska guud ee baabuurta dhan shirkadda caymiska ee (micnaheedu ma aha caymis oo dhan on baabuurta oo dhan waxaa la bixin doonaa isku mar).
Mararka qaarkood Banks dhigi heshiisyada derivative is-kansali. tusaale: 2x Banks geli Heshiisyada 2x:
Contract1 = Bank1 bixiyo $ 10M si Bank2 haddii qiimaha kor u kaco
Contract2 = Bank2 bixiyo $ 10M si Bank1 haddii qiimaha kor u kaco.
Tani 1000x ka dibna ay u tagaan is faanin in kasta oo kale oo ku saabsan cabbirka ay faylalka tacliimeed derivative.
Qofna ma run ahaantii ay ula socdaan karaan kuwa ku leedahay waxa kan in taagayo, waxa a qasan wareer badan, laakiin dhacdo hay'ahadaha sida Caal Guddoomiyaha Janet Yellen si lama filaan ah kor u dulsaarka in 5% u badan tahay implode lahaa System derivative oo dhan iyo Banks ah oo ay la socdaan in, maxaa yeelay, ahina uu saamayn domino iyo bangiga qaar ka mid ah ay u badan tahay waxay noqon lahayd gacanta xun on khamaar derivative iyo kacda.
nacas Qaar ka mid ah (waxaa laga yaabaa in bangi kale) leedahay lahaa kaydka iyo hantida bangiga kacda ee, iyo sidoo kale wajihi kicitaan. Tani waxay keeni lahaa kalsoonida oo ka lunta in bangiyada iyo qof kasta bilaabi lahaa jiidaya ay lacag si ay u ilaaliyaan ammaan-, keenaya saamayn fatahmaan ee muranada bangiga.
$1 Quadrillion = $1000 Trillions = $1 Million balaayiin ama $1 billion Malaayiin
Ahraam hantidooda The
Ahraam hantidooda ayaa la abuuray Sawirashada ururka fasalada hantida marka la eego halista iyo size. Ahraam hantidooda waxaa loo abuuray inta lagu jiro waqtiga in United States, marka dollar kasta waxaa taageeray by Gold. Gold foomamka saldhig yar ee ugu qiimaha lagu kalsoon yahay, iyo fasalada hantida on heerarka isa soo taraysa sare waa khatar badan. Cabbirka weyn ee fasalada hantida heer sare waa ka wakiil ah guud ahaan qiimaha sare oo dunida guud ee hantida kuwa.
Sida korodhka halista dhaqaale, lacag ku socotaa in ka hantida khatar badan guurto (taagayo), in hantida khatar ugu yaraan (si ay lacag caddaan ah jirka ka dibna dahab ah). Wax walba waa aan halista, laakiin halis yahay qaraabo. Arrinta waa in ay jiraan waa mid aad u yar oo lacag caddaan ah jirka iyo Gold xitaa ka yar marka loo eego hantida khatar badan, taas oo ka dhigaysa ganacsi dadku in times of khatarta sare marka qof kastaa uu rabo in ay ku boodaan lacag caddaan ah iyo dahab, riixaya ilaa qiimaha.
The leydi huruud ah in yar oo dhanka hore bidix waa dhan dahabkoodu wuxuu dunida ku jira qaab jireed. Oo dahabkii la adduunka ugu AHAYN oo dhan “fasalka maalgashi dhaqaale” foomka.
The $1 Quadrillion derbiga taagayo lacag caddaan ah baaba'ayso meel fog, maxaa yeelay, $1 Quadrillion waa qiimaysay ah oo ay falanqeeyayaashu fiican oo runta qofna runtii waa ogyahay size dhabta ah ee Suuqa ku taagayo.
Gebi asalka ah ee Ingiriisi halkan: demonocracy.info
guide User bilowga ah ee ganacsi Forex
Noocyada kala duwan ee Binary Options
Powered by WordPress iyo Gridbox.